Wajjiri Kongirasii Fedeeraalawaa Oromoo (KFO) Humnoota Mootummaatiin Guyyaa Hara’aa Sakata’amera – YEROOBLOG
Wajjiri Kongirasii Fedeeraalawaa Oromoo (KFO) Humnoota Mootummaatiin Guyyaa Hara’aa Sakata’amera
Yerooblog	News & Views, Oromo Protests	 February 21, 2016 February 21, 2016 1 Minute
Wajjirri Kongirasii Feedaralawaa Oromoo (KFO) guyyaa hara’a humnoota mootummaatiin sakata’ameera. Humnoonni mootummaa wajjira KFO marsuudhaan erga miseenota isa reebanii booda, sakkata’a cimaa akka taasisan odeeffannoon Finfinnee irraa nugahe ni ibsa. Yeroo sakkata’aan sun adeemsifametti dura taa’aan KFO Dr. MararaaGuddinaa wajjira keessa akka hinturre beekameera.
Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin (TPLF) durfamu KFOn qarshii biyya alaatii argameen mormii uummanni Oromoo taasisa jiru qindeeseera jedhani himachaa jiru. Kanaafis dhaabbata Oromoo bakka bu’ee karaa nagaa qabeessa ta’een qabsaa’a jiru KFOtiin yakkuudhaan uummanni Oromoo dhaabbata mormiitu bakka isa bu’u akka hinqabanneef hojjechaa jira.
KFO dadhabsiisuuf jecha mootummaan TPLF yeroo mormiin Maastar Pilaanii jalqabametti hoggantoota KFO kanneen ta’an Obbo Baqalaa Garbaa, Obbo Addisuu Bulaalla fi kanneen biroo qabuudhaan mana hidhaatti naqeera.Obbo Baqalaa Nagaa immoo akka mana isaaniitii gad hinbaanee fi hojii isaanii akka hin hojjenne erga godhamnii ji’a lamaa olta’uufi. Sababa mormii Oromoon gochaa jiruun KFOn akka malee mootummaa biyya bulchaa jiruun miidhameera. KFOn hiriira mormii Finfinneetti gaggeessuuf yeroo hedduu gaafatus mootummaan sababa gahaa hintaaneen isaan dhorkacha ture.
Mootuummaan TPLF yookiin wayyaanee mormiin Oromoo waan itti cimaa dhufeef waan qabee gadhiisu walaalaa jira. Ummata Oromoo ajjeessuu, hidhuu fi daraaruu itti fufee jira. Dhaabbilee uummata Oromoo bakka bu’anii socho’aa jiran to’annoo isaa jala galfachuuf socho’aa jira. Haata’u malee qabsoon Oromoo garuu akka itti fufetti jira. Ajjechaa, hidhaa fi reebicha uummata Oromoo mirgasaa kabajiifachuuf kutate ka’e duubatti kan deebisu hin fakkaatu.
Previous Post Oromos Will Never Give up the Fight!
Next Post History will never Forget Oromo Heroes & Heroines killed by the Ethiopian Armed Forces!
2 thoughts on “Wajjiri Kongirasii Fedeeraalawaa Oromoo (KFO) Humnoota Mootummaatiin Guyyaa Hara’aa Sakata’amera”
February 26, 2016 at 13:05